About Us - Guangzhou Aiweidy Ukukhanyisa Acoustics Co., Ltd
G uangzhou Aiweidy Ukukhanyisa Acoustics Izinsiza kusebenza Co., Ltd, Singabantu omunye yokukhiqiza professional nokuthengisa amabhizinisi yokukhanyisa esiteji. Inkampani yethu yasungulwa ngo-1992, futhi manje isipiliyoni engu-18 '.
Inkampani linayo eziphambili hhayi kuphela ukukhiqizwa, kodwa futhi eziningi ephezulu, ngobuchwepheshe, onjiniyela abaqeqeshiwe kanye intuthuko kwabasebenzi abaqeqeshiwe futhi lobuchwepheshe, inani elikhulu ngenkuthalo, ubumbano abasebenzi kakhulu. Inkampani idumela isitjhijilo, imibono zobuchwepheshe ezintsha, futhi njalo ukudala imikhiqizo high ukuthi ngcono ukuncintisana core amabhizinisi. Ngo-2003 inkampani lidlule 09001: 2000 isitifiketi izinga ngamazwe, futhi wasitholela "CE", "CCC" isitifiketi.
Idumela Aiweidys 'lokuqala, izinga lokuqala, emisha lokuqala, inkonzo lokuqala "indlela, umoya zabantu -oriented, innovation futhi intuthuko eqhubekayo" ibhizinisi ifilosofi, njengoba ngaso sonke isikhathi, ukunikeza amakhasimende ethu nge eliphezulu kakhulu imikhiqizo lekahle futsi namasevisi angaphandle amaklayenti ukubuyela esisekela nothando.
G uangzhong Aiweidy Ukukhanyisa Acoustics Izinsiza kusebenza Co, Ltd, kuyinto ucwaningo nentuthuko, zokukhiqiza, yokuthengisa and service yokukhanyisa professional kanye umsindo enkundleni ephezulu tech amabhizinisi Inkampani itholakala Baiyun District of Guangzhou City, esehlanganise 15 Acra, ukwakha indawo ka 25000 m ^ 2. Izitshalo engadini, umthombo Ornamental ngaphakathi ichibi. 700 m ^ 2 embonini ezihlakaniphile studio multi-functional, ezingaphezu kuka 1.000 square metres ehhovisi isikhala yesimanje. Ngemva kweminyaka yentuthuko 20, inkampani isibe emadolobheni amakhulu kakhulu amabhizinisi isikali Mkhiqizo ezweni lonkana zithunyelwa kuwo wonke umhlaba, futhi amakhasimende ezifuywayo angaphandle ngokufanayo.
Guangzhou Aiweidy Ukukhanyisa Acoustics Izinsiza kusebenza Co., Ltd, Singabantu omunye yokukhiqiza professional nokuthengisa amabhizinisi yokukhanyisa esiteji. Inkampani yethu yasungulwa ngo-1992, futhi manje isipiliyoni engu-18 '. Siye asebenzisa isimiso ukuphathwa inethiwekhi ikhompyutha, kanye nokuphathwa izinga uhlelo ngokuhambisana ngokuqinile ISO9001: Izidingo 2000 ukukhiqizwa. Imikhiqizo yethu ziye isitifiketi nge "CCC" futhi "CE" futhi "RoHS".
Imikhiqizo Aiweidy ukujabulela idumela elihle ezimakethe zomhlaba jikelele, ikakhulukazi izibani ezihambayo ikhanda, izibani zethu LED futhi izibani ongaphandle. Manje, imikhiqizo yethu lithunyelwa Europe, eNingizimu-mpumalanga Asia, eMpumalanga Ephakathi, eNyakatho naseNingizimu Melika abaye nakwamanye amazwe kanye izifunda. Lapho ubheka ikusasa, bonke abalingani of Aiweidy ayoba wumgomo quality lokuqala, inkonzo lokuqala, emisha kuqala futhi ukuthembeka kuqala njalo ukukhonza amakhasimende nabangane kusuka ekhaya aphesheya.